Omunye yamazwe athandwa kakhulu ngamaholide zasehlobo bakithi ngoba zamashumi eminyaka athile edlule kuyinto Bulgaria. Ngakwelinye ihlangothi, omunye zokungcebeleka ozithandayo baseRussia lapha isivele babe Sunshine Coast. Lokhu akusona isimanga, ngoba isimo sezulu enempilo zendawo ulwandle ahlanzekile ngokuphelele kwahambisana mass Amahotela ivumelane yonke akuthandayo futhi amabhajethi, kanye inala ezihlukahlukene zokuzijabulisa. Namuhla singathanda bajwayelane kwelinye lamahhotela engcono the resort ngokuthi Kotva 4 *. Sithola ukuthi Ihhotela likuvumela izivakashi zayo, kanye ufunde mayelana yini ongayenza, njengoba ayefike eholidini phezu Bulgarian Sunny Beach.
Uphi ehhotela "Kotva 4 *"?
Leli hhotela itholakala engxenyeni eseningizimu resort Bulgarian ngokuthi Sunny Beach. Kotva 4 * iseduze Imperial 4 * phezu komugqa wokuqala (ibanga ebhishi kuyinto 150 metres). Isakhiwo ehhotela esuswa maphakathi amakhilomitha amane. Sekukonke, edolobheni mlando Nessebar itholakala 800 metres kusukela ehhotela. Ibanga phakathi sezindiza Bourgas futhi Kotva ehhotela 4 * ingamakhilomitha angu esingaphansi 40. Ngakho, lapho sifika uzofika ehhotela in esingaphansi kwehora. Lena Ukugunda kakhulu uma uya eholidini nezingane ezincane.
Bulgaria. Kotva Ihhotela 4 *: Incazelo
Ngokokuqala ngqá izicabha zalo izivakashi leli hhotela lavulwa ngo-1975. Njengoba kukhona ukulungiswa eziningana ezinkulu, owokugcina eyayiqhutshwa onyakeni owedlule. Namuhla Kotva 4 * (Sunny Beach, Bulgaria) kuyinto ehhotela elithokomele lesimanje futhi stylish, okuyinto uphelele abantu abakhetha ukuhlala ukhululekile. Impahla yakhiwa ezimbili ezine izindlu 470 befaka ikamelo. Le ndawo ngensimu yehhotela ngokwayo kuyinto ayizinkulungwane 22 square metres.
Izinqubomgomo ehhotela four-star "Kotva"
Ngokuhambisana nemithetho ye ehhotela Kotva 4 * (Bulgaria), ukulungisa futhi ngokuhlala abahambi ibibhukelwe amakamelo abo enziwe ngemva 14:00. Uma efika ehhotela kancane ngaphambi kokuphela kwalesi sikhathi, ungakwazi ushiye izikhwama zakho isemithwalweni okugcinwa bese uya kwasemini noma ngqo echibini. Uma ngesikhathi sokufika yakho ekuseni ikamelo elibhukiwe ubusuvele kwesokunxele izivakashi odlule futhi naso isikhathi sokulungiselela udondolo lwakhe, wena kuzogcwalisa ngokushesha.
Ngosuku kokuhamba kusukela Kotva 4 * phuma kuyadingeka ukwenza kuze kube amahora ayishumi nambili ngosuku. Ngesikhathi esifanayo kufanele ukhokhele indawo yakho bese usebenzisa amasevisi eyengeziwe. Uma pre-ikhokhwe ngokugcwele yokuhlala aso inkampani yokulungisela abahambayo, ihhotela uzobona kuphela babe ukukhokhela izinsiza ezengeziwe. Ungakwazi ukukhokha imali and plastic amakhadi yokukhokha izinhlelo "Visa", "Mastercard" futhi "Maestro". Ngaphezu kwalokho, uma ukubhuka nge-Inthanethi nge-credit card, khumbula ukuthi Ihhotela kungenzeka sikukhokhise kusengaphambili. Kulokhu, lo akhiphe kusukela Kotva 4 * uzobona kuphela ukukhokha lemali esele yokuhlala kanye nokusebenzisa amasevisi angeziwe.
Kusukela ehhotela yakhelwe ikakhulukazi izivakashi umndeni lapha ihlanganise izingane yanoma yimuphi yobudala. Lapho ibekwe egumbini lakho ingane abaneminyaka kuze iminyaka emibili ingane uhlaka liyadingeka ukukhokha 2.5 euro ngalunye usuku ukuhlala. Khumbula ukuthi eyodwa kuphela umntwana uhlaka ingafakwa egumbini ngalinye. Ufaka imibhede extra izingane ezindala kanye nabantu abadala ngeke enikeziwe.
Ngokusho imithetho yangaphakathi ehhotela Kotva 4 * (Sunny Beach, Bulgaria), uvunyelwe ukuze uhlale izivakashi ukuhamba nezilwane abazifuyile. Nokho, lokho uhlela ukuya ehhotela isilwane, kumele azise kusengaphambili. Kwezinye izimo, wesilwane ehhotela yokuhlala lizokhokhiswa.
Laba bobabili isakhiwo ezine storey ehhotela Kotva 4 * (Sunny Beach) zitholakala 470 amakamelo. Izinhlobo ehhotela eziyinkimbinkimbi Isikhwama kuhlanganisa amakamelo ejwayelekile kanye Suites. amakamelo Standard amayelana 24 square metres. Bona angazamukela kuze kube abadala abathathu noma ababili abadala kanye nezingane ezimbili. Le ndawo efulethini kuyinto 42 square metres. Lezi amakamelo kuqukathe lokulala embhedeni kabili futhi egumbini lokuphumula. It angazamukela abantu abadala ababili nezingane ezimbili noma abadala abathathu nengane eyodwa izivakashi. Ngaphezu kwalokho, Kotva Ihhotela 4 * (Bulgaria) futhi ine amakamelo eyenzelwe abakhubazekile.
Ngalinye igumbi eyinkimbinkimbi ehhotela has a yokugezela yangasese, air conditioning, satellite TV, kwisiqandisi noma mini-bar, ngocingo, hairdryer, kuvulandi. Futhi, ngenkokhelo, ungakwazi ukufinyelela ku-intanethi engenantambo. Esitezi egumbini tile noma laminate. Amakamelo bahlanza nsuku zonke, amashidi washintsha kabili ngesonto.
Ezokudla Kotva 4 * (Bulgaria) inikezwa amacebo amathathu: kuphela kwasekuseni lezitsha e yokudlela ehhotela, nengxenye-ibhodi liqukethe ibhulakufesi kanye dinner (ukudla imenyu noma lezitsha) kanye "zonke okufakayo" (kwasekuseni, kwasemini kanye dinner ngesimo elinezinhlobonhlobo kwasemini kanye dinner imenyu). On-site kukhona zokudlela ezimbili: kwamakhamera ocingo "a la Carte", lapho ungakwazi oda à la Carte. Kukhona futhi eqhuba ibha yokwamukela izivakashi, kanye nesigaxa pool lapho ungakwazi ukujabulela ezihlukahlukene kokubili uphuzo okungezona notshwala kanye notshwala.
Ihhotela Bulgarian "Kotva 4 *" akanayo ayenazo ebhishi yangasese ngesikhathi. Nokho, itholakala emgqeni wokuqala, futhi siye ebhishi eliseduze ambalwa engamakhulu amamitha. Beach kuyinto anesihlabathi uhlanzekile kakhulu, kukhona zonke ezidingekayo ingqalasizinda: ilanga loungers kanye baphathe nezambulela (ngenkokhelo), kanye ibha beach. Indawo yokungena olwandle uyisicaba futhi ngaphandle amatshe, ukuze ebhishi mkhulu okuphumuzayo, ngisho izivakashi kulencane.
Ihhotela ezine inkanyezi "Kotva", use-Bulgaria, has zonke ezidingekayo ukuze ukhululekile ukuhlala izivakashi ingqalasizinda. Ngakho, edeskini reception ngema-awa lange-24 ngosuku evulekile. Ngakho-ke, uma ukufika sekwephuzile ehhotela noma uma kwenzeka izinto eziphuthumayo, ungahlala ngiphendukele umphathi emsebenzini, oyokusiza ukuxazulula zonke izinkinga. Ngaphezu kwalokho, izisebenzi eziningi Kotva 4 *, abahambi Izibuyekezo uqinisekise lesi, ukukhuluma isiRashiya, ngakho incazelo yenkinga nabo ngeke neze ube.
Futhi, ihhotela Ungashintshanisa lwemali, ukuthenga izinto ezidingekayo kanye izinto eziyizikhumbuzo esitolo encane, shiya izinto eziyigugu kuleli ephephile edilini lomshado, ukuze Igumbi inkonzo, ukuqasha imoto, incwadi uhambo unesithakazelo, ezomile yokuhlanza nelondolo amasevisi. Yokulinda Ihhotela likuvumela khulula Wi-Fi. Ngaphezu kwalokho, i-isikhungo ku-site wezokwelapha, lapho bangakwazi ukusebenzisa endabeni zokugula.
"Kotva * 4" has a yokupaka endaweni enkulu, ukusetshenziswa okuyinto mahhala ehhotela izivakashi. Ngakho uma unquma ukuya eholidini ngesikhathi imoto yakhe noma ukuqasha imoto kakade Bulgaria, izinkinga nge yokupaka ungeke ube.
Ngaphezu kwalokho, kukhona ikamelo lengqungquthela esizeni. Ungayisebenzisa ngemali ethile. Igumbi lenkomfa has zonke impahla edingekayo.
On endaweni-inkanyezi emine "Kotva" ehhotela has ezine ongaphandle okubhukuda 400, 300, 250 no-50 square metres. Ababili babo izingane futhi ifakwe amaslayidi amanzi. Eduze pool kukhona ithala ilanga, ifakwe ilanga loungers nezambulela, ukusetshenziswa ohleshulelwe ehhotela izivakashi mahhala. Futhi eduze pool kukhona bar lapho ungakwazi oda njengoba iziphuzo ozithandayo oludakayo kanye okungezona notshwala.
Ukuze izivakashi ehhotela "Kotva 4 *" kungukuthi unesizungu lapha kulo lonke Animators usuku nakusihlwa ukusebenza. Banakekela ngendlela mnandi ezokungcebeleka izivakashi, kanye abahambi omncane.
Futhi kule eziyinkimbinkimbi ehhotela, ungadlala amabhiliyade, table tennis, ejimini, wezinwele, Jacuzzi, sauna noma massage. Ngesikhathi sebehlezi ogwini ungadlala -volleyball yasolwandle namanzi ezemidlalo.
Kotva 4 * (Bulgaria): Izibuyekezo
Ukuze abahambi eziningi lapho ekhetha ihhotela zidlala ababalulekile amazwana ubulapha abantu. Ngakho-ke sinikeza ukuthola ukuthi abantu bacabangani lonke bakithi in the eziyinkimbinkimbi ehhotela we Gold Coast eBulgaria "Kotva 4 *."
Ngokuvamile, iningi izivakashi basutha nge ukuhlala kwakho kuleli hhotela. Bakholelwa ukuthi "Kotva" liyalingana amangalelwe inkanyezi izinga ezine. izivakashi Iningi bayojabulela indawo elula ehhotela endaweni sasivumela ithule cwaka futhi inokuthula, kodwa budebuduze nenqwaba izitolo, izindawo zokudlela, amathilomu kanye zokungcebeleka - edolobheni mlando Nessebar.
Kakhulu umbono omuhle kwesokunxele ngokwabo ehhotela. Zonke izivakashi baye baqaphela ukuthi muva nje baye kuyilungisa ngokoqobo kukhanye okwakhe nobumsulwa. Nokho, kancane namahloni holidaymakers izinga wokuhlanza emakamelweni. Ngakho, ngezinye izikhathi abasebenzi ehhotela kwesokunxele embhedeni unmade, noma akazange esikhundleni amathawula ezingcolile aphonswe phansi.
Kepha ukudla, ngokuvamile izivakashi basutha ukunambitheka kanye nekhwalithi, kanye lokuzikhethela eziningi izitsha. Labo ngaphambilini ehhotela ibhulakufesi kuphela, futhi Akazange akhononde, njengoba eduze "Kotva" kunensada zokudlela lapho ungakwazi ukudla ngemali ephansi impela.
Sasithanda bakithi okubhukuda esizeni. Ngo ukubuyekeza kwabo bathi amanzi ihlale ihlanzekile futhi sun bed nezambulela kokwanele. Izingane futhi ujabule edlala ku amanzi mini-roller coaster epaki.
Kepha ebhishi, kukhona izivakashi kancane imicabango yabantu washintsha. Ngakho, umuntu wajabula kakhulu nge budebuduze lolwandle (imizuzu emihlanu uhambo), isihlabathi esihle kanye entry mnene olwandle. Nokho, ezinye zezivakashi udidekile inqwaba izivakashi ogwini, futhi ngokunjalo njalo engenzeka ukuthola sunbeds khulula nezambulela.
Ngokuvamile, iningi izivakashi ezivela eRussia nakwamanye amazwe CIS, isiBulgaria ezine-star hotel "Kotva" kwesokunxele isipiliyoni ikakhulukazi omuhle. Babengeke ancoma leli hhotela kubangani nomndeni.
Incazelo Sunny Beach
resort Bulgarian ngokuthi Sunny Beach ithatha semikilometrovuyu nomdweshu wezwe elisogwini 30 ukusuka enyakatho emzini Burgas. Itholakala kude amathrekhi ujantshi kanye nemigwaqo, ngakho Umoya ucwengile begodu kuhle empilweni. Sunny Beach resort ngobukhulu kuleli zwe. Ngakho, izigaba ezahlukene mayelana 800 lwamahhotela esisogwini insimu yalo.
Sunny Beach Luhle imindeni nezingane. Phela, kolwandle ayijulile eduze nogu, e engajulile amanzi entry, amahhotela kakhulu kukhona amachibi zezingane amaslayidi amanzi kanye ebaleni lokudlala. Libuye amakhilomitha 10 nje kusuka resort kukhona amanzi ipaki esikhulu, lapho bangakwazi nijabula, kokubili abadala kanye nezingane. I plus enkulu ukuthi wonke amahhotela e Sunny Beach zitholakala ngasogwini futhi ukufinyelela kolwandle, asikho isidingo ukwehla entabeni noma ukwehla ngezitebhisi.
Kodwa abakholelwa ukuthi kule ndawo yeholide ihloselwe kuphela amadoda umndeni ehloniphekayo abakhetha ukuhlala ethule futhi zikhululekile. Ngakho, intsha lapha nabo bayothola ukuthi yenzeni. Ngempela, phakathi nenkathi izivakashi lapha siyasebenza mass kuma-nightclub nasezindaweni disco.
Ububanzi ogwini Sunny Beach elingamamitha 30 kuya 40. Isihlabathi kuhle futhi kumnandi kakhulu. It has a umbala golden. Phakathi zinesilinganiso sezinga lokushisa ehlobo lapha zokhahlamba kusuka 22 kuya ku-30 degrees Celsius, izinga lokushisa kwamanzi kuyinto kusuka 20 kuya 26 degrees Celsius.
The yokungcebeleka has zonke izimo ezihlukahlukene amanzi ezemidlalo. Ngakho, at service yakho lapha has nemishini windsurfing, Ukushushuluza amanzi, amabhayisikili, parachutes, hang Awama-Glider, izikebhe, yezikebhe, banana yesikebhe, isikebhe, njll Futhi kuleli yokungcebeleka ungadlala volleyball, mini-football, ibhola lomphebezo, i-basketball, igalofu mini, ukuyodlala i-bowling, ngebhayisikili, nihambahambe ku kyokushin ngamahhashi.
I-smartphone ye-Nokia Lumia 735: ukubuyekezwa, incazelo, imininingwane kanye nokubuyekezwa kwabanikazi